Inona moa ny volamena volamena? (Kapila simika)
Ny volamena fotsy dia alalana malaza ho volamena mavokely, volafotsy , na platinum . Ny olona sasany dia maniry ny loko volomboan'ny volamena fotsy amin'ny loko mavomavo ny volamena voajanahary, kanefa mety mahita ny volafotsy ho malefaka na mora levona na ny vidin'ny platinum ho voarara. Na dia misy volamena maromaro aza ny volamena fotsy, izay mavo foana, dia misy metaly fotsy iray na maromaro ihany koa mba hanamaivana ny loko ary hanampy tanjaka sy maharitra.
Ny metaly fotsy mahazatra izay mamolavola ny fotsy volamena dia ny nikela, palladium, platinum ary manganese. Indraindray dia vita varahina, zina na volafotsy. Na izany aza, ny varahina sy ny volafotsy dia endriny amin'ny endriny amin'ny endriny na amin'ny hoditra, ka ny metaly hafa dia tsara kokoa. Ny fahadiovana ny volamena fotsy dia aseho amin'ny karats, mitovy amin'ny volamena mavo. Ny votoatin'ny volamena dia voafintina amin'ny metaly (oh: 10K, 18K).
Ny lokon'ny volamena fotsy
Ny fananana volamena fotsy, anisan'izany ny lokony, dia miankina amin'ny firafetany. Na dia mieritreritra ny ankamaroan'ny olona aza ny volamena fotsy dia metaly fotsy fotsy, izany loko izany dia avy amin'ny metaly metaly rhodium izay ampiharina amin'ny firavaka volamena fotsy rehetra. Raha tsy misy ny fehiloha rhodium, dia mety volom-behivavy mainty fotsy, mainty mena, na mavokely.
Lamina hafa izay azo ampiharina dia platira legamo. Amin'ny ankapobeny, platin dia miady amin'ny iridium, ruthenium, na cobalt mba hampitombo ny hamafiny.
Platinum dia mazava ho azy. Na izany aza, lafo kokoa noho ny volamena izany, ka mety halefa amin'ny peratra volamena fotsy izy mba hanatsarana ny bika aman'endriny raha tsy mitombo ny vidiny.
Ny volamena fotsy izay misy ny isan-jatony amin'ny nikela dia manakaiky indrindra amin'ny loko fotsy tena izy. Manana tononkalo malama izy io, nefa fotsy be noho ny volamena madio.
Ny volamena fotsy Nickel dia matetika no tsy mitaky amin'ny fingotra amin'ny rhodium amin'ny loko, na dia azo ampiharina aza ny loko mba hampihenana ny mety ho fihenan'ny hoditra. Ny volamena fotsy Palladium dia legioma matanjaka iray hafa azo ampiasaina raha tsy misy lakaoly. Ny volamena fotsy Palladium dia misy loko matevina.
Ny volamena hafa dia miteraka loko hafa, anisan'izany ny mena na ny raozy, manga ary maitso.
Ny tsy fahasalaman'ny volamena
Ny firavaka volamena vita amin'ny volamena dia azo avy amin'ny volamena-palladium-silver legioma na volamena-nikel-varahina-zinc legato. Na izany aza, eo amin'ny olona iray eo amin'ny valo dia misy fihetseham-po amin'ny fihanaky ny nikela, izay matetika amin'ny endriky ny hoditra. Ny ankamaroan'ny mpanamboatra firavaka avy any Eoropa sy ny mpamokatra indostrian'ny amerikana dia manaloka volamena fotsy volo, satria tsy dia mahazatra loatra ny famolavolàna tsy misy dikany. Ny firavaka nikela dia matetika no mihaingo amin'ny firavaka volamena efa tranainy ary amin'ny peratra sy tsangantsanganana sasany, izay ahafahan'ny gilasy mamoaka volamena fotsy izay matanjaka tsara mba hijoro amin'ny akanjo ary hamafa ireo traikefa amin'ny firavaka.
Mitazona ny fitaratra amin'ny volamena fotsy
Ny firavaka volamena volamena misy platin na rhodium plating dia tsy azo ovaina raha toa ka manimba ny loko. Ny fanodinana amin'ny firavaka dia hikorontana sy hitafy ny fotoana.
Ny firavaka dia afaka manamboatra ilay singa amin'ny alàlan'ny fanesorana vato, mametaka ny metaly, mametaka azy, ary mamerina ny vato eo amin'ny toerany. Tsy maintsy nosoloina ronono isan-taona ny fehiloha. Vao ora vitsy monja no hanatanterahana izany, amin'ny vidiny eo amin'ny $ 50 hatramin'ny $ 150.
Ahoana ny fijerin'i Popcorn
Afaka manaisotra ny ranon'orana amin'ny rano mangatsiaka ve ianao?
Nahoana no mora levona ny ping pong?
Ahoana ny fomba hanaovana kapila sy varahina
Lisitr'ireo Zavatra Miely ao Amin'ny Hazavana Mainty (Fahazavan'ny Ultraviolet)
Nahoana Ianao no Mahatsiaro ny Mangatsiatsiaka?
Inona no volombava Tibetana?
Inona ny Mylar? Famaritana, fananana, fampiasana
Frantsay mampitaha adihevitra: Ny fomba amam-panao azy
Ny fomba hakana vola amin'ny laptop ary tokony ho anao
What are Register Register?
Anarana farany amin'ny teny alemana sy ny dikany Anglisy
Ny fototry ny fitaovam-pitaterana maingoka (Maglev)
Inona no dikan'ny teny Japoney "Mata"?
Tadiavo ao amin'ny Word Search Puzzles and Answer Keys
Mpandresy ao amin'ny Tournament Players
Ahoana no fomba ampianarako ny zanako ahoana no mandehandeha?
Kolontsaina any Shina
Ny ankamaroan'ny tanàna any Etazonia dia hitan'ny ankamaroan'ny oram-baratra sy ny oram-baratra
Texas dia manana fandaharan'asa mba hisorohana ny olana an-tariby
University of West Florida GPA, SAT sy ACT Data
Computer Keyboards any an-tany hafa
Ahoana ny fandroahana ny Camry ivelany ivelany Front Door
Ny antony antony hiheverantsika an'i Cristo Redentor
Momba ny Komity Federal Trade, Consumer Watchdog
Famaritana sy anarana avy amin'ny MENDOZA
Ny lalan-kizorana mankany amin'ny lalao baolina kitra